ပင်မစာမျက်နှာ » App ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ
အဆိုပါ AppsApk အက်ပ်များလျှောက်လွှာ၏သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ
AppsApk Applications ကိုယင်း၏အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အချို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများကိုစုဆောင်း။
ဒေတာကို Controller ဟာပိုင်ရှင်
အဆိုပါ app များကိုအပေါ်ကောက်ခံသည့်ဒေတာများအမျိုးအစားများ
ပထဝီဆိုင်ရာတည်နေရာ, Cookie နှင့်အသုံးပြုမှုမှာ Data: ဤလျှောက်လွှာစုဆောင်းကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုအမျိုးအစားများအနက်သူ့ဟာသူသို့မဟုတ်တတိယပါတီများမှတဆင့်ရှိပါတယ်။ စုဆောင်းသည်အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများကဤ privacy ကိုမူဝါဒသည်အခြားကဏ္ဍများအတွက်သို့မဟုတ်ဆက်စပ်အခြေအနေအချက်အလက်စုစည်းနှင့်အတူဆက်ကပ်အပ်နှံရှင်းပြချက်ကိုစာသားဖွငျ့ဖျောပွထားနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူဒေတာများကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုသူများကထောက်ပံ့ပေး, ဒါမှမဟုတ် AppsApk လျှောက်လွှာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအလိုအလျောက်စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။ မဆိုကွတ်ကီး၏အသုံးပြုမှုကို - သို့မဟုတ်အခြားခြေရာခံခြင်း tools များ၏ - ဤ App ကိုအားဖြင့်သို့မဟုတ်ဤလျှောက်လွှာအသုံးပြုသော Third-party န်ဆောင်မှုများ၏ပိုင်ရှင်များအသုံးပြုပုံမဟုတ်ရင်ဖော်ပြထား, အသုံးပြုသူများဖော်ထုတ်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏ဦးစားပေးအောက်မေ့လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုပေး၏တစ်ဦးတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်မဟုတ်လျှင် အသုံးပြုသူသည်။ အချို့သောတစ်ဦးချင်းဒေတာများကိုပေးရန်ပျက်ကွက်ပါကမဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီလျှောက်လွှာက၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဘို့လုပ်လိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူကဒီလျှောက်လွှာမှတဆင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသို့မဟုတ် shared တတိယပါတီများ၏ကိုယ်ရေးဒေတာများအဘို့တာဝနျယူသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုသို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်ဖို့ခွင့်ရှိသည်မှမိန့်တော်မူ၏, အရှင်အားလုံးတာဝန်များ၏ဒေတာများကို Controller သက်သာရာ။
ဒေတာ processing ၏ Mode ကိုရပျရပျ
အဆိုပါဒေတာများကို Controller တစ်ဦးသင့်လျော်သောထုံးစံ၌အသုံးပြုသူများ၏ဒေတာများကို process လုပ်တယ်နှင့်သင့်လျော်သောလုံခြုံမှုကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ data တွေကို access ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အစီအမံများ, ထုတ်ဖော်, ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်အချက်အလက်များ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပျက်စီးခြင်းကိုယူကြမည်။ အဆိုပါဒေတာများကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ကွန်ပျူတာများ အသုံးပြု. ထွက်သယ်ဆောင်နှင့် / သို့မဟုတ်အိုင်တီညွှန်ပြသည့်ရည်ရွယ်ချက်များမှတင်းကြပ်စွာဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် Modes သာအောက်ပါ, tools တွေကို enabled ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာစင်တာအပြင်, အချို့ကိစ္စများတွင်အချက်အလက်ဆိုက် (အုပ်ချုပ်ရေး, အရောင်း, စျေးကွက်, ဥပဒေရေးရာ, စနစ်အုပ်ချုပ်ရေး) သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောတတိယအဖြစ်ပြင်ပပါတီများ (များ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူပါဝင်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်များအချို့အမျိုးအစားများကိုမှလက်လှမ်းဖြစ်နိုင်သည် လိုအပ်ခဲ့လျှင်ပေးသူ, အိုင်တီကုမ္ပဏီများ, ဆက်သွယ်ရေးအေဂျင်စီများ hosting -party နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေး, မေးလ်သယ်ဆောင်,) ကိုပိုင်ရှင်အားဖြင့်ဒေတာများလုပ်ငန်းရှင်များအဖြစ်, ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ဤအပါတီများ၏ updated စာရင်းသည့်အချိန်တွင်မဆိုဒေတာ Controller ကနေမေတ္တာရပ်ခံနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါဒေတာများအချက်အလက် Controller ၏ operating ဆာဗာများမှာနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အတူပါဝင်ပါတီများတည်ရှိသည်ဘယ်မှာမဆိုတခြားနေရာတွေမှာအုပ်ချုပ်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, ဒေတာများကို Control Center သို့ဆက်သွယ်ပါ။
အဆိုပါဒေတာများအဆုံးအသုံးပြုသူများကမေတ္တာရပ်ခံန်ဆောင်မှုများကိုလိုအပ်သောအချိန်စောင့်ရှောက်လျှင်, သို့မဟုတ်ဤမူဝါဒဖော်ပြထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအားဖြင့်ဖော်ပြထားသဖြင့်, အသုံးပြုသူအမြဲတမ်းဒေတာများကို Controller ဒေတာရပ်ဆိုင်းရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ကြောင်းတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုများကို '' အကောင့် Access ကို, တည်နေရာ-based interaction က, အကြောင်းအရာပြင်ပလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူမှတ်ချက်နှင့် Interaction: အဆိုပါဒေတာများကိုအသုံးပြုသူအတွက်လျှောက်လွှာကိုအောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကို၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးအဖြစ်ခွင့်ပြုပါရန်စုဆောင်းနေသည်ကိုရည်မှတ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရည်ရွယ်ချက်ဤစာရွက်စာတမ်းများ၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍများတွင်ဖော်ပြထားသောသည်အဆိုပါကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါလျှောက်လွှာများကမေးလျှင် Facebook မှာခွင့်ပြုချက်
ဤသည်လျှောက်လွှာကနေ, ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများအပါအဝင်ကအသုံးပြုသူရဲ့ Facebook အကောင့်နှင့်အတူလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့်ပြုတချို့ Facebook မှာခွင့်ပြုချက်မေးလိမ့်မည်။ အောက်ပါခွင့်ပြုချက်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအဆိုပါ Facebook မှာခွင့်ပြုချက်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် Facebook မှာ privacy ကိုမူဝါဒရည်ညွှန်းသည်။ ဟုမေးတဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေကိုအောက်ပါနေသောခေါင်းစဉ်:
ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီထိုကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ခြင်း, အမည်, ရုပ်ပုံ, ကျား, မ, မိမိတို့ဒေသအဖြစ်အချို့သောအသုံးပြုသူရဲ့ဒေတာပါဝင်သည်။ ထိုသို့သောသူငယ်ချင်းများအဖြစ်အသုံးပြုသူအချို့ဆက်သွယ်မှု, ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူဟာသူတို့ရဲ့ဒေတာအများပြည်သူပိုမိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီဆိုလျှင်, နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူအပ်လုဒ်တင်ထားပါသည်နှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုအသုံးပြုသူအတွက် tagged ထားပြီးဓာတ်ပုံများမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပါသည်။
App ကို Activity ကို Publish
app ကို Built-in လုပ်ဆောင်ချက်များ, အောင်မြင်မှုများ, ရမှတ်, ဒါမှမဟုတ်စိတ်တိုင်းကျလုပ်ဆောင်ချက်များသုံးပြီးဖွင့်ပါဇယားမှထုတ်ဝေဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီ app ကိုလည်း Facebook ရဲ့ထုတ်ဝေရေးအာဏာပိုင်များစာရွက်စာတမ်းများအတွက်အသေးစိတ်သောကတခြားလုပ်ဆောင်မှုထုတ်ဝေရန်နိုင်ပါတယ်။
တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုများကို '' အကောင့် Access ကို
ဤဝန်ဆောင်မှုများဒီလျှောက်လွှာမှာ third-party ဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင်သင်၏ပုဂ္ဂလိကအကောင့်မှဒေတာများရယူနှင့်လုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများကိုအလိုအလျောက် activated ပေမယ့်အသုံးပြုသူများကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ Facebook အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ခွင့် (ဤလျှောက်လွှာ)
ဒီဝန်ဆောင်မှုကို Facebook Inc ကိုခွင့်ပြုချက်များကပေးအပ် Facebook ကိုလူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူရဲ့အကောင့်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကဒီလျှောက်လွှာမေးခွင့်ပြု: Check-ins, Email, Likes, ဓါတ်ပုံများနှင့် App ကို Activity ကို Publish ။
အကြောင်းအရာမှတ်ချက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသူများကဒီ App ကိုရဲ့ contents အပေါ်သူတို့ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်စေခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခွင့်ပြုပါ။ အဆိုပါပိုင်ရှင်ကရွေးချယ်သည့်ဆက်တင်ပေါ်တွင် conditional options များ, အသုံးပြုသူများကိုလည်းအမည်မသိမှတ်ချက်များစွန့်ခွာလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူကပေးအပ်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများအကြားအီးမေးလ်လိပ်စာလည်းမရှိဆိုပါကတူညီသောအကြောင်းအရာအပေါ်မှတ်ချက်တွေ၏အသိပေးချက်များကိုပေးပို့ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်ချက်များများ၏ content များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ တတိယအုပ်စုတွေကပေးအပ်မယ့်အကြောင်းအရာမှတ်ချက်ဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းပါကနေဆဲအသုံးပြုသူများသည်ဝန်ဆောင်မှုမှတ်ချက်အကြောင်းအရာအသုံးမပြုလျှင်ပင်မှတ်ချက်ဝန်ဆောင်မှုကို install ရှိရာစာမျက်နှာများတွင်အဘို့ကို web traffic ကိုဒေတာစုဆောင်းလိမ့်မည်။
Facebook က Comments (Facebook မှ)
Facebook ကမှတ်ချက်ထားခဲ့ပါနှင့် Facebook ကပလက်ဖောင်းမှာသူတို့ကိုမျှဝေဖို့အသုံးပြုသူအားဖွင့်ရဲ့ Facebook Inc ကိုပေးမယ့်အကြောင်းအရာမှတ်ချက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် Comments ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖို့ဒေတာစုဆောင်း: Cookie နှင့်အသုံးပြုမှု Data ဖြစ်ပါတယ်။
ဤဝန်ဆောင်မှုများလူမှုကွန်ယက်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဒီလျှောက်လွှာ၏စာမကျြနှာကနေအခြားသောပြင်ပပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအပြန်အလှန်ခွင့်ပြုပါ။ ဒီလျှောက်လွှာအားဖြင့်ရရှိသောအပြန်အလှန်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အစဉ်အမြဲအသီးအသီးလူမှုကွန်ယက်များအတွက် AppsApk privacy settings တွေကိုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ လူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုအားဖွင့်အပြန်အလှန် installed လျှင်နေဆဲအသုံးပြုသူများကအသုံးမပြုလျှင်ပင်န်ဆောင်မှုကို install ရှိရာစာမျက်နှာများတွင်များအတွက်အသွားအလာဒေတာစုဆောင်းလိမ့်မည်။
ခလုတ်နှင့်လူမှုရေး Widgets တွေကဲ့သို့ပင် Facebook မှ (Facebook မှ)
ကွတ်ကီးနှင့်အသုံးပြုမှုမှာ Data: အဆိုပါ Facebook မှာလိုပဲခလုတ်ကိုနှင့်လူမှုရေး Widgets တွေ Facebook မှာ Inc ကိုကိုယ်ရေးဒေတာများကိုပေး Facebook ကိုလူမှုကွန်ယက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်စုဆောင်းခွင့်ပြုန်ဆောင်မှုများဖြစ်ကြသည်။
တည်နေရာ-based interaction က
ဤသည်လျှောက်လွှာ, အသုံးပြုမှုစုဆောင်းနှင့်တည်နေရာ-based ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူတည်နေရာဒေတာများကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။ အများစုမှာ browser များနှင့် devices တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ feature ကနေဖယ်ထုတ်နိုင်ရန် tools များကိုပေး။ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ပါပြီလျှင်, အသုံးပြုသူရဲ့တည်နေရာဒေတာကိုကဒီလျှောက်လွှာအားဖြင့်ခြေရာခံနိုင်ပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖို့ဒေတာစုဆောင်း: Geographic အနေအထား။
အသုံးပြုသူရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများကိုတရားရုံးအတွင်းသို့မဟုတ်ဤလျှောက်လွှာသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမလျော်ကန်သောအသုံးပြုမှုမှပေါ်ပေါက်ဖြစ်နိုင်သောဥပဒေရေးရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှဦးဆောင်သည့်အဆင့်၌, ဒေတာများ Controller အားဖြင့်ဥပဒေရေးရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအသုံးပြုသူဒေတာ Controller အများပြည်သူအာဏာပိုင်များ၏တောင်းဆိုမှုကိုအပေါ်သို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုထုတ်ဖေါ်ရန်လိုအပ်သည်စေခြင်းငှါ၎င်းအချက်ကိုသတိပြုမိသည်။
အသုံးပြုသူရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများနှင့် ပတ်သက်. အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်
ဒီ privacy ကိုမူဝါဒပါရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအပြင်၌, AppsApk Apps ကပအထူးသန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်တောင်းဆိုချက်ကိုအပျေါမှာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ကိုရည်မှတ်အပိုဆောင်းနှင့်ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူအသုံးပြုသူပေးနိုငျသညျ။
System ကိုမှတ်တမ်းများနှင့်အမူအကျင့်များကို Maintenance ကုဒ်
စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, ဒီလျှောက်လွှာနှင့်မည်သည့် Third-party န်ဆောင်မှုသောဤလျှောက်လွှာ (System ကိုမှတ်တမ်းများ) နဲ့စံချိန်အပြန်အလှန်ဖိုင်တွေစုဆောင်းဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ် (ထိုကဲ့သို့သော IP Address ကိုကဲ့သို့) ကိုယ်ရေးဒေတာများကတခြားဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့ကိုအသုံးပြုပါ။
ပြန်ကြားရေးဒီ privacy ကိုမူဝါဒပါရှိသောမဟုတ်
ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများများစုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့ကိုရည်မှတ်အသေးစိတ်မည်သည့်အချိန်တွင်ဒေတာ Controller ကနေမေတ္တာရပ်ခံနိုင်ပါသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်း၏အစအဦးမှာအဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုပါ။
App ကိုအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများသိမ်းဆည်းထားခဲ့ပြီး, ၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုနှင့်ဇာစ်မြစ်အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့၎င်းတို့၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအတည်ပြုရန်သို့မဟုတ်ဖြည့်ဆည်းခံရဖို့သူတို့အဘို့အမေးရန်ဒေတာ Controller တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်, ဖျက်သိမ်း, updated သို့မဟုတ်ရှိမရှိသိရန်, မည်သည့်အချိန်တွင်ခွင့်ရှိသည် တညျ့, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အသွင်ပြောင်းဘို့အမည်မသိပုံစံသို့သို့မဟုတ်ဥပဒေချိုးဖောက်တှငျကငျြးပခဲ့ဆိုဒေတာပိတ်ဆို့ဖို့အဖြစ်ဆိုအပေါင်းတို့နှင့်တရားဝင်အကြောင်းပြချက်အဘို့မိမိတို့ကုသမှုဆန့်ကျင်ဖို့။ တောင်းဆိုမှုများကိုအထက်အထဲကသတ်မှတ်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်မှာဒေတာများကို Controller မှစလှေတျတျောရပါမည်။
အဆိုပါဒေတာများကို Controller ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိ၎င်း၏အသုံးပြုသူများမှအသိပေးစာပေးခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဒီ privacy ကိုမူဝါဒအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်အောက်ခြေမှာစာရင်းကနောက်ဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံ၏နေ့စွဲကိုရည်ညွှန်းမကြာခဏဒီစာမျက်နှာစစ်ဆေးအကြံပြုသည်။ တစ်အသုံးပြုသူပေါ်လစီဖို့အပြောင်းအလဲများကိုမဆိုမှ objects လျှင်, အသုံးပြုသူသည်ဤလျှောက်လွှာကို အသုံးပြု. လည်းငြိမ်းရပါမည်နှင့်ဒေတာများ Controller ဟာကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုဖျက်ပစ်ကြောင်းတောင်းဆိုနိုင်သည်။ မဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားဘဲနေလျှင်, ထို့နောက်-လက်ရှိ privacy ကိုမူဝါဒမှာ Data Controller အသုံးပြုသူများနှင့် ပတ်သက်. ရှိပါတယ်အားလုံးကိုယ်ပိုင်ဒေတာများသက်ဆိုင်သည်။
သဘာဝလူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည့်တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အသင်းအဖွဲ့, နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်ပုံတင်နံပါတ်အပါအဝင်အခြားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မှရည်ညွှန်းအသုံးပြုပုံပင်သွယ်ဝိုက်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
IP လိပ်စာသို့မဟုတ်ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုဖို့သူအသုံးပြုသူများအားဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်ကွန်ပျူတာ၏ဒိုမိန်းနာမည်များ, အ URI လိပ်စာများ (Uniform Resource Identifier), အခြိနျ: ဤလျှောက်လွှာ (သို့မဟုတ်ဤလျှောက်လွှာအတွက်အလုပ်တတိယပါတီန်ဆောင်မှု) တို့ပါဝင်သည်နိုင်သည့်ကနေအလိုအလျှောက်စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက် တောင်းဆိုချက်၏, ဆာဗာဖို့တောင်းဆိုစာတင်သွင်းဖို့အသုံးပြုသွားမည်နည်းလမ်း, ဖိုင်အရွယ်အစား, တုံ့ပြန်မှုအတွက်ဆာဗာ၏အဖြေကို (စသည်တို့ကိုအောင်မြင်သောရလဒ်, အမှား,) ၏အဆင့်အတန်းကိုညွှန်ပြသည့်ကိန်းဂဏန်းကုဒ်, ဇာစ်မြစ်၏တိုင်းပြည်လက်ခံရရှိခြင်း, browser ကိုနှင့်အသုံးပြုသူအားဖြင့်အသုံးပြုသွားမည် operating system ရဲ့ features တွေ, အလည်အပတ်နှုန်းအမျိုးမျိုးအချိန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို (ဥပမာ, အချိန်လျှောက်လွှာအတွင်းအသီးအသီးစာမျက်နှာပေါ်တွင်သုံးစွဲ) နှင့်လမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစာမကျြနှာမြား၏ sequence ကိုအထူးရည်ညွှန်းနှင့်အတူလျှောက်လွှာအတွင်းနောက်တော်သို့လိုက် သွားရောက်ကြည့်ရှုလျက်, device ကို operating system ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူရဲ့အိုင်တီပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်. အခြားအ parameters တွေကို။
ဒေတာကိုပရို (သို့မဟုတ် data ကိုကြီးကြပ်ရေးမှူး)
သဘာဝလူတစ်ဦး, ဥပဒေရေးရာလူတစ်ဦး, ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်အခြားခန္ဓာကိုယ်, အသင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်ဤ privacy ကိုမူဝါဒနှင့်လိုက်နာမှုအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုစီမံဆောင်ရွက်ရန်မှာ Data Controller အားဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အဖွဲ့အစည်းက။
ဒေတာကို Controller (သို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်)
သဘာဝလူတစ်ဦး, ဥပဒေရေးရာလူတစ်ဦး, ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်ညာဘက်နှင့်အတူအခြားမည်သည့်ခန္ဓာကိုယ်, အသင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းပူးတွဲအခြားဒေတာများကို Controller နှင့်တကွ, ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုစေခြင်းငှါ၎င်း, အပါအဝင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများ၏နည်းလမ်းများ, ဒီလျှောက်လွှာများ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်အသုံးပြုမှုကိုရည်မှတ်လုံခြုံရေးအစီအမံများ။ အဆိုပါဒေတာများကို Controller, မဟုတ်ရင်သတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်လျှင်, ဒီလျှောက်လွှာများ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူရဲ့ device ကိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အချက်အလက်များ၏အသေးစားအပိုင်းအစ။
ဥရောပအသုံးပြုသူများမှသတိထားမိ: ဤ privacy ကိုကြေညာချက်အနုပညာအောက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရား၏ပွညျ့စုံအတွက်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ EC အညွှန်ကြားချက်များ 10 ဎ။ 95 / 46 / EC များနှင့်ညွှန်ကြားချက် 2002 / 58 / EC များ၏ပြဌာန်းချက်အောက်တွင်, ကွတ်ကီး၏ဘာသာရပ်ပေါ်ညွှန်ကြားချက် 2009 / 136 / EC အနေဖြင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ privacy ကိုမူဝါဒကတစ်ခုတည်းကိုသာဒီလျှောက်လွှာမှပြောပြတယ်။ နောက်ဆုံးရအပ်ဒိတ်: ဇွန်လ 11, 2014 ။